Mmalite nke Uganda Tugende na-echekwa $ 3.6M ọzọ na usoro
Mmalite nke Uganda Tugende nwetara $ 3.6M ọzọ na Usoro A
Ebe E Si Nweta: gotugende.com
Ihe mmalite ego nke Uganda Tugende enwetala $ 3.6M na ego mgbakwunye ọzọ iji mechie usoro A.
N'ime ọrụ kemgbe mbubreyo 2020, ego a na nso nso a nke Partech na-eduzi, yana nsonye n'aka Enza Capital na ndị na-etinye ego na mpaghara mpaghara, na-eweta ngụkọta ego isi ego Tugende natara na $ 9.9M.
Amalitere na 2012 site n'aka onye isi ụlọ ọrụ Michael Wilkerson Tugende na-eji ego bara uru, teknụzụ, yana ụdị nkwado ndị ahịa dị elu iji nyere micro, obere, na obere ụlọ ọrụ aka (MSMEs) nwere akụ na-eweta ego.
Thelọ ọrụ ahụ abụghị naanị ụlọ ọrụ na-akwado ego na-akwado ego na mpaghara ọwụwa anyanwụ Africa. Site na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dịka M-KOPA Kenya ama ama maka inyere ezinụlọ ndị na-enweghị ego aka ịzụta ngwa elektrọnik, Tugende chọtara niche ya site na ịwulite ngwongwo mgbazinye na nke ndị na-akwụ ụgwọ maka ndị ọkwọ ụgbọ ala gafere Uganda na Kenya.
Na mgbakwunye na ịnye akụ anụ ahụ dịka tagzi ọgba tum tum, injin ụgbọ mmiri, ụgbọ ala, na friji, ngwugwu ahụ gụnyere ọzụzụ, mkpuchi ahụike na ndụ, akụrụngwa nchekwa, na nkwado aka maka ndị ọkwọ ụgbọala site na njem ha na inwe.
Ihe ikpo okwu na-enye ugwo di iche iche maka ihe onwunwe. Nke a pụtara na site na data nke ndị ọrụ ya, Tugende nwere ike ịnye ndị ahịa niile akara kredit na-akpaghị aka iji nyere ha aka nyochaa arụmọrụ ha, mepee ohere gụnyere ego na ị nweta akụ ọhụrụ.
N'ịbụ ndị jerela ozi karịa ndị ahịa 43,000 nwere ihe karịrị 16,000 ugbua bụrụ ndị nwe ma ọ dịkarịa ala otu ihe onwunwe, mmalite ahụ amalitela nke ọma iji gboo ihe nkwụsị $ 331 ijeri MSME chere ihu gafee Africa.
Companylọ ọrụ ahụ gbasaa na nso nso a na Kenya ma na-enwewanye mmepe ala na ihe karịrị $ 20M na ụgwọ ụgwọ site na Partners Group Impact Investments, US Development Finance Corporation, Symbiotics, Frankfurt School Financial Services, Agora, Yunus Social Business, Global Social Impact Fund, na Oikocredit.
Site na ịbawanye ụba ngwaahịa ya na ọdịiche ngwaahịa ya, yana ịmepụta usoro okike dijitalụ ọzọ maka SME na ezinụlọ ha na-eto, Tugende nwere onwe ya iji nyere ọtụtụ nde ndị nwere obere azụmaahịa aka ịba ụba akụ na ụba ezinụlọ ha, nkwụsi ike akụ na ụba ma na-eme ka ọdịnihu dị mma. maka ezinụlọ ha.
Ikekwe, nke a bụ arịrịọ ya na Partech nke kpebiri itinye ego na ụlọ ọrụ ahụ n'afọ gara aga "n'etiti ọrịa na-efe efe" ka Tidjane Deme si kwuo, onye mmekọ n'ozuzu na ụlọ ọrụ VC bụ onye na-eduba ego Partech Africa.
“Tugende jikọtara teknụzụ na arụmọrụ siri ike iji nyere ọtụtụ nde ndị ọkachamara aka ịzụlite azụmaahịa ha ma mee ka akụ na ụba gaa n’ihu. Anyị ga-akwado Michael na ndị otu ya iji wulite teknụzụ teknụzụ, mezie ihe nlereanya ma gbasaa na ahịa ọhụrụ, ” Deme kwuru.
“Tugende nwere ikike gosiputara imeghe oru ndi oru aka ya site na ntinye ego ya na ndi ahia ya. kwukwara Mike Mompi, Onye Mmekọ na Enza Capital.